Musharrax Cabdi Cilmi Jaamac (Cabdi Qutur) Oo Si Rasmi Ah U Shaaciyey Musharraxnimadiisa Doorashada Golaha Wakiilada Somaliland Ee Gobolka Maroodi Jeex
Sunday April, 22 2018 - 17:22:37
Sunday March 06, 2016 - 09:01:40 in by salman abdi
Cabdi Cilmi Jaamac (Cabdi Qutur) ayaa ku dhawaaqay inuu u sharraxan yahay doorashada la filayo inay sannadka danbe horraantiisa ka qabsoonto dalka jamhuuriyadda Somaliland,
kana sharraxan yahay xisbiga mucaaridka ah ee Waddani. Qoraal kooban oo uu Cabdi Cilmi ugu talo galay saxaafadda ayuu ku sheegay sidan:
"Aniga oo ah Cabdi Cilmi Jaamac (Cabdi Qutur) waxaan halkan kaga dhawaaqayaa in aan ahay musharrax gobolka maroodi jeex uga tartamaya golaha wakiilada Somaliland sannadka danbe haddii Ilaahay yidhaahdo.
Wada tashi mug leh oo aan la yeeshay waxgaradka, odayada, dhalinyarada iyo madax dhaqameedka waxay igu taageereen in aan noqdo musharrax golaha wakiilada ah oo ka sharraxan gobolka Maroodi Jeex. Waxay si qiimo leh u soo dhaweeyeen musharraxnimadayda iyagoo ku qancay iguna tixgaliyay aqoontayda iyo waayo aragnimadayda shaqo oo mid maamul iyo mid ganacsiba leh anigoo labadaba muddo dheer ku soo jiray. Waxaan laba jeer soo qabtay xilkii guddoomiyaha ganacsatada adhiilayaasha dawladdii hore ee Somalia, waxaan sidoo kale ka mid ahaa aasaasayaashii iyo maamulka shirkadda maraakiibta caanka ah ee SeaLine Shipping Agency oo muddo ka badan labaatan sano jirtay illaa haddana shaqaynaysa, xarrunteeduna tahay magaalada Berbera.
Sababta igu kalliftay in aan isu taago doorashada ayaa ah anigoo u arkay in maanta aan aqoontayda iyo waayo aragnimadayda aan bulshada Somaliland wax ugu qabto anigoo gar waaqsan inay bulshada Somaliland baahi wayn u qabto horumar iyo waxqabad.
Ugu danbayn waxaan u mahad naqayaa bulshada ii garatay in aan noqdo xubin u tartamaysa doorashada golaha wakiiladana aan u matalo. Waxaan soo dhawaynayaa cid kasta oo talo iyo toosinba diyaar iila ah. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu inagu guuleeyo doorashada insha Allah.”